अचम्म : हावामा अडिएको ढुंगा देखि सिंगो पहाडलाई थाम्न सक्ने ढुंगासम्म ! - Internet Khabar
अचम्म : हावामा अडिएको ढुंगा देखि सिंगो पहाडलाई थाम्न सक्ने ढुंगासम्म !
October 30, 2018 October 30, 2018 Internet Khabar
एजेन्सी । हाम्रो धर्ती नै ढुंगा र माटोले बनेको छ । हाम्रो वरिपरि अर्थात बसोवास गर्ने क्षेत्रमा धेरै साना ढुंगा हुन्छन् भने खोलाको ठाउँ तिर ठूला ढुंगा हुन्छन् । ढुंगाको आकार अनुसार, त्यसका काम पनि फरक फरक हुन्छन् । कतै यति ठूला ढुंगा हुन्छन् की ती ढुंगालाई जोडेर पहाड नै बनाइएको पनि हुन्छ ।
अज्मिर शरिफ दर्गाह एक ठूलो ढुंगाको नाम हो । यो ढुंगा हावामा अडिएको छ । यो तारागढ़ पहाडमा छ । यो ढुंगा जमिन भन्दा इन्च माथी छ । यो ढुंगा न तल खस्छ, न हल्लिन्छ, न त् कतै टेकेको नै छ । वैज्ञानिकहरुले हावामा अडिएको उक्त ढुंगाको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन्, तर यसको रहस्य भने पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनन् । स्थानिय मानिसहरुले उक्त ढुंगालाई पौराणिक कथासंग जोडेका छन् ।
उनीहरुका अनुसार, उक्त ढुंगा कोही व्यक्तिको टाउको माथी खस्दै थियो । त्यही समयमा त्यो व्यक्तिले भगवानलाई पुकार्यो र त्यो ढुंगा खस्दै गर्दा हावामै अडियो । गोल्डन रक नामको एउटा ठूलो ढुंगा माथीबाट खस्न थाल्दा त्यहाँको डिलमा अडिएको जस्तो देखिन्छ । यो ढुंगालाई हेर्ना साथ थोरै छुने हो भने पनि यो ढुंगालाई हेर्ना साथ थोरै छुने हो भने पनि यो ढुंगा तल खस्छ जस्तो लाग्छ ।
तर, मानिसहरुले धकेल्दा, तुफान आउँदा पनि यो ढुंगा कतै चल्दैन । यो पहाडको २५ फिटमा छ। यो ढुंगा रहेको ठाउँ तिर्थस्थल बनेको छ । स्थानिय मानिसहरुले एक वर्षमा तीन पटक उक्त ढुंगा भएको ठाउँमा आउनाले घरमा धन सम्पत्ति आउने मान्छन्
आज घट्यो सुन चाँदीको मूल्य, हेर्नुहोस् बजार भाउ
धनी बन्ने रहर छ, अपनाउनुस् यी ७ सूत्र !
October 5, 2017 July 28, 2018
किरिया बसेको ८ औं दिनमा मरेको छोरा जिउँदै फर्किएपछि